トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Kanjani ukubona ngokusebenzisa isikhathi ezishisa wamakhaza pachinko
Futhi ashisayo noma izoni yesikhathi wena ukuthi singakanani isikhathi, ungase uzwe kahle. Ukuqina izoni yesikhathi, kuye ngokuthi isimo wamakhaza pachinko we indawo kanye isimo ukusebenza kanye yokuthengisa, kuyofika ezinye umehluko iphelelwe ngokuphelele. Ngo, ngoba angicabangi abajonqile izoni yesikhathi ungazi, lapha thina uyokwethula inkulumo jikelele pachinko emakhazeni we obukhulu izoni yesikhathi.
onephunga izoni yesikhathi, okungukuthi, pachinko eshintsha kuyoba wesikhathi ukuthi ungathanda ukwandisa ukusebenza. 'S zone ithemba isikhathi ukuza lamakhasimende akahle kakhulu. Ngakho, wesikhathi ezinjalo, ungase eza itshalwe okuthile ohlangothini pachinko emakhazeni. Ngokwesibonelo, bheka kahle umehluko isikhathi phakathi evulekile. Kwezinye izimo
1 imodeli kuphela, ukumisa sebuningini onobuhle, kukhona icala ukuba kuvulwe isikhathi umehluko. Futhi sengathi 13 ezimpondweni wavuleka, 18 ezimpondweni imodeli evulekile, ngicabanga ukuthi abanye abantu ozibone le imenyezelwa. Iqiniso lokuthi has umehluko isikhathi evulekile, wukuthi ofuna egijima ngaleso sikhathi. Futhi, in the imodeli ukuthi uba yisisulu umehluko isikhathi evulekile, noma Horukon ukuphakama kulungiselelwa ukubeka izimoto ezimbalwa ngokuvamile, thina noma uzama ukuvula kunokujwayelekile nail ukulungiswa.
futhi ukudlala ibuke isikhathi umehluko evulekile, ngicabanga ukuthi-ke kuyindlela enhle ukunqoba.
Ngaphezu kwalokho, uma ezifana akusona isikhathi umehluko evulekile, indlela abakhuluma izoni yesikhathi iyona ashisayo noma, okuningi ezimpondweni ntambama kusukela mayelana 3:00 pm 5 noma 6, kanye izoni yesikhathi obukhulu phezulu ngenhloso th Nakuba wena. Kulesi izoni yesikhathi, utjho godu kobana abajonqile umkhawuko wesikhathi, abantu ababeza Tomokazu is wenzile utshalomali ngezinga elithile.
Ngaphezu kwalokho, i-data ngayizolo, njengoba idatha amahora ambalwa ngosuku kungabonwa, kuka iya ku Tomokazu, Ngimelela kungenzeka ukukhetha. Uma mina nenhloso yesikhulumi is yayizovela, kuka zifa hit kuzo zonke etafuleni, kuyoba nenzuzo.
manje kukhona onobuhle anemisila isici ngokuthi latency ematfuba ukushintshashintsha. Kuyinto ezitolo, kodwa ngaphandle ukusula le esicashile ematfuba ukushintshashintsha, kungcono futhi ukuthi uke ezaqhubekela ngosuku olulandelayo. Pati okunjalo Uma uthola esitolo Nko, kungase bathi Tomokazu futhi abajonqile izoni yesikhathi.
Nokho, ukuthola le ematfuba ukushintshashintsha ukubambezeleka, Ngiyathanda Miyabureru lo ukubambezeleka, ngoba kufanele sikhumbule ingxenye, kodwa uzodinga ukufunda kancane, kodwa noma kunjalo, uma uthola ukuthi Tomokazu, ocacile ematfuba ukushintshashintsha uku yangaphakathi ngoba ukuhunyushwa ukuthi, bekuyoba aqedwe nge utshalomali elincane phezulu ukudweba hit. Uma ngalesi sikhathi, ukuthi ezifana ematfuba wahamba lingaphezulu, hhayi umkhawulo wesikhathi ezingaba lokugcizelela isimo sangempela. Konke
pachinko umshini, kusukela ROM iphethwe, ngaphandle uma une-remote control, kungenxa yokuthi kungcono izitolo kungenzeki uhlangothi uma lidlalwa. Nokho, kuye ngokuthi izenzakalo we umkhawulo wesikhathi nezitolo ohlangothini eyaphakanyiswa ngaphambili, ihlose izitshalo uyobe kakhulu ayisesemikhulu phansi. Izinkundla isikhathi, futhi ezifana izitolo ngabanye futhi yereferensi, zama kuhloswe wesikhathi ukuthi kungaba kahle utshalomali.